Ukukhululwa-Windows 8 uye eyaqanjwa eziningi mpikiswano. Ngaphezu kwalokho, baye bahlanganyela cishe zonke izizukulwane abasebenzisi, njengoba uhlelo olusha lokusebenza ubelokhu kakhulu okuxubile. Ikakhulukazi hhayi wanelisa izilaleli phakathi Metro, kwazise abantu abaningi babengabathandi ungaboni futhi ungaziboni umqondo kuwo.
Ngaphezu kwalokho, cishe zonke lezo abasebenze izinguqulo ngaphambili we-Windows, ngokuphelele akakwazi ukuqonda butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi amanye amasethingi. Iqiniso lokuthi ezinye zazo zitholakala kuphela imodi "zakudala ', desktop, kanti abanye - kusukela efanayo" Metro "kuphela. Yiqiniso, esibonakalayo ecacile friendly kohlelo Kuyaphawuleka akusho ukwengeza.
Ingabe uyazi ukuthi ukuya kumodi ephephile? Windows 8, ngisho kule ndaba, inikeza abasebenzisi bayo isikhathi esiningi sokucabanga. Usacabanga ukuthi ukungena "Imodi ephephile" kwanele ucindezela F8 ngesikhathi uqalisa? Maye, ngakho ngeke uthole lutho, ngoba Microsoft banquma ukungayisebenzisi nhlobo ukuhamba ngendlela elula. Kodwa okwanele isosha esihlatshelelwayo. Ake sizame ukubhekana ngendlela Kusengenzeka ukusebenzisa le imodi.
Kodwa ngaphambi lokho akusho ubuhlungu ukuthola ukuthi yini-ke konke mayelana. A imodi ephephile kuleli cala libhekisela enjalo ukucushwa kwesistimu, lapho kuphela esemqoka umthwalo abashayeli kanye nezinsizakalo. Lokhu kuvumela esiphezulu ukuzinza OS, usiza ukuhlonza izinhlelo ezimbi futhi amamojuli.
Ngaphezu kwalokho, ukungena Safe Mode (i-Windows 8 - iyathinteka) ngokuvamile kakhulu esetshenziswa ukuhlonza nokuqeda malware, njengoba kulokhu, bangase futhi bakwazi ukuba ivuleke ku-RAM. Yiqiniso, sikhuluma zilwane bakudala iningi labo, kodwa ezinye WinLocker ukulungiswa ukuze ukwazi ukunqoba ngempela.
Futhi omunye. Kaningi kuyenzeka ukuthi ngenxa yokwehluleka 'nensimbi' ingxenye (amakhadi ezehlukene umsindo, isibonelo), uhlelo uqala behluleka. Ngo-Safe Mode, ungaqala ukuze lungisa futhi uthole ukuthi yini ngempela wabangela glitches.
Uma udinga ukwesekwa esiphezulu iyona zekhompyutha ezibaluleke kakhulu, kutuswa ukusebenzisa thwebula inketho kusukela "usekelo inethiwekhi abashayeli." Ngaphezu kwalokho, ezimweni eziningi, lapho ukulungisa iphutha sina ucishe ethile, cishe ngeke badinga usizo womyalelo.
Kusho ukuthini konke lokhu ukudlala kanjani? Lokhu kuzoxoxwa ngakho esihlokweni sethu.
"System yoMiso» (Msconfig.exe)
Njengoba kwaba njalo ngo-izinguqulo ezandulele-Windows, lokhu kuyindlela kakhulu elula. Ungasiza Umbuso indawo uhlelo "System yoMiso", okuyisona esiphethe msconfig.exe ifayela. Noma kunjalo, abasebenzisi imfundamakhwela akunakwenzeka ukuba okuthile akusho.
Ngakho kanjani e kumodi ephephile? Windows 8, uma sikhuluma le ndlela, akuyona futhi okuningi ezahlukene kusukela ezazingaphambi kwayo. Kuyadingeka ukuba ucindezele inhlanganiselazihlonzi Win R, bese ebhokisini elivelayo ukufaka MSConfig umyalo. Cindezela u-Enter, bese phambi kwakho kukhona edingekayo Umbuso ibhokisi.
Kuyadingeka ukuba uye kuthebhu "Landa" bese efakwa ebhokisini isheke eduze inketho "Safe Mode". «OK» Cindezela. Lokhu kuzoletha ibhokisi lengxoxo ekwazisa ukuyiqalisa. Ukuze uqinisekise i-Windows 8 Safe Mode, ungamukela isiphakamiso ngokuchofoza inkinobho ethi "Setha kabusha", futhi ungakwazi senqabe. Kulo mBhalo kubalulekile chofoza "Phuma ngaphandle ukuqalisa phansi."
Ungakhathazeki. Ngisho noma ungafuni ukuba kabusha ikhompyutha yakho manje, ngesikhathi kwethulwa okwalandela kohlelo ukuyisebenzisa "Imodi Safe". Okubalulekile! Uma imbangela iphutha, noma ukwenza ezinye izenzo, kungenzeka kuphela kule modi, qiniseka ukuchofoza endleleni ngenhla futhi, bese ungakhethi ibhokisi. Kungenjalo, uhlelo lizoqhubeka ukulayisha kulesi sifundazwe. Futhi indlela ukuya kumodi ephephile? Windows 8 inikeza okuningi ngezindlela, ngakho qhubeka.
Sisebenzisa inhlanganisela okhiye Shift Qala kabusha
Okokuqala, cindezela okhiye Win mina on the keyboard, bese ngakwesokudla iphaneli izoveza nemingcele. Ekupheleni kwalo aphansi kukhona izinkinobho ezimbalwa, phakathi okuyinto thina banesithakazelo "off". Chofoza ke. Ingabe vela imenyu ongakhetha phakathi kwawo kukhona inketho "Qala kabusha." Ngu ukhiye SHIFT bese uchofoze into esele inkinobho yegundane.
Futhi into eyodwa ngaphezulu. Ukuze ufinyelele kumodi ephephile (i-Windows 8, ngeshwa, ayenzelwanga sensor ubuchwepheshe), umsebenzisi kumele usebenzise ikhibhodi.
Uhlelo uzoqala ukuba afeze kabusha. Ngemva BIOS kunodonga Windows ibhokisi lengxoxo ejwayelekile livela phambi ngawe okuzokwenza ukhetha okukhethwa wazifunela nohlobo ukusebenza ohlelweni. Phakathi kwabo, sinesithakazelo kuphela kwento "Ukuxilonga". Ngaphandle kwayo, kwethulwa imodi ephephile Windows 8 Ngeke ukwazi.
Chofoza le nkinobho ne inkinobho yesinxele. "Izilungiselelo ezithuthukisiwe" ibhokisi lengxoxo lizovela. Imenyu, okuyinto libala zonke izindlela ezingakhona ezengeziwe, khetha "Boot Izinketho" lento. Uhlu, okuyinto inketho oyifunayo "Vumela Ukuvikeleka". Khetha it, bese uchofoza "Layisha kabusha". I qapha ukuboniswa ngokushesha wanikela ezintathu angakhetha ukuzenza. Yini edingekayo Safe Mode Windows 8?
Uma udinga "Imodi Safe", kufanele ucindezela ikhi F4. Uma kwenzeka udinga ukusekelwa inethiwekhi abashayeli, badinga F5 inkinobho F6, lapho kwabanye isinyathelo batawudzinga kwesekelwa umyalo line imodi ukulingisa. Ngemva ngokucindezela noma iyiphi kumakhi yazo zonke uhlelo ngenhla izothunyelwa ukuqalisa phansi uhlobo ekhethiwe kumodi ephephile.
Sisebenzisa kumodi ephephile lapho ukuqala kusuka CD / DVD
Ngo-Windows 8 (kodwa hhayi i-Windows 8.1, inothi), unenketho yokudala ezimele nokutakula isistimu disk. Uma une-ke, i-boot kuwo. Indlela ukuya kumodi ephephile (i-Windows 8.1 futhi ivumela kwakungenzeka lokhu) kusukela abezindaba optical?
Ukuze wenze lokhu, kuzomele uqale ukusetha inketho "Boot kusuka CD / DVD» kwimenyu BIOS. Ngokucacile ukuchaza le ndlela ngeke kwenzeke, njengoba kukhona okwamanje angaphezu kweshumi nambili "BIOS" ukuhlela kabusha, kodwa ngoba une ukucinga imiyalelo efanele kuwebhusayithi kwabakhiqizi.
Ngokushesha ngemva ukuqala kusuka abezindaba optical, uzokwaziswa ukukhetha oyifunayo isendlalelo sekhibhodi. Ngokushesha ukhethe elilodwa oludingekayo ukuze esinye isinyathelo. Lokhu kuzoletha ibhokisi lengxoxo izinketho, okuyinto thina kakade okukhulunywe ngaye esigabeni esandulele. Ngenxa yalokho, bonke yezenzo zakho okwengeziwe kuyoba ezifanayo nalezo esiye okukhulunywa ngenhla.
Sebenzisa i-USB uhlelo ukulungisa disc
Windows 8 (futhi i-Windows 8.1 kanye) has a umsebenzi ngalo ungakha ye-USB drive for ukululama kungenzeka. Ngaphezu kwalokho, ungase futhi ukulanda "windose" ngendlela evikelekile ngosizo yayo. Indlela ukukwenza? Esigabeni esandulele sikhulume ukuqala kusuka i disc optical. Nalapha futhi, uye kuwebhusayithi yomenzi, bese uthole ukuthi ungakwazi Boot kusuka idrayivu flash usebenzisa imodeli yakho BIOS. Zonke izinyathelo okwalandela zifana nalezo ezichazwe ngenhla.
Indlela ukudala yokutakula flash drive?
Ebhokisini Metro, uthayipha igama "alulame" bese ukhetha "Izilungiselelo" ukuvula ibhokisi elihambisana. Kuyadingeka ukuba chofoza inkinobho yesinxele entweni "Dala Disc Lokubuyisela", ke "Iseluleki" ekhethekile kuzokwethulwa.
Ku-window, ukhethe "Kopisha ukwahlukanisa sokuthola PC ukubuyisela disk", njengoba kulokhu, ke izobandakanya zonke izici ekhethekile ayatholakala kukhompyutha yakho. Uma ungeke ukwazi hlola ibhokisi (akusiyo esebenzayo), khona-ke une kulesi sigaba idrayivu uhlelo alikho. Okubalulekile! Uma ufuna ukwenza izenzo okukhulunywa, udinga ifleshikhadi okungenani 16 GB. Uma ungenza ngaphandle kwalo, kuyoba okwanele, ngisho 256 MB.
Phawula ukuthi noma ngabe isikhala esanele kudiski esikhiphekayo, yonke idatha liyobhujiswa. Landela iwizadi, bese uchofoza inkinobho ethi "Qeda". Lindela amaminithi ambalwa ... Konke! Manje uqala e Safe Mode izotholakala. Windows 8, ke kungaxazululwa malware.
Futhi F8 (Shift + F8) ngezinye izikhathi usebenza!
At ekuqaleni kwalesi sihloko thina wabhala mayelana lokuthi ezinguqulweni ngaphambili Windows ukuba ivuleke kwimodi ephephile kwanele nje ucindezela ikhi F8 ngokushesha ngemva BIOS logo esibukweni. Saxoxa futhi mayelana lokuthi entsha yesistimu yokusebenza lokho kungasebenzi. Nokho, akubona bonke ngakho elula.
Kwezinye izimo, kungase kushiya sekhibhodi Shift + F8, lapho ongakhetha ebhuthini Ukukhetha iwindi iqala. Okubalulekile! Isikhathi esining impela kwenzeka ukuthi "catch" okwamanje lapho le nhlanganisela izosebenza, akunakwenzeka. Uma usebenzisa ikhompyutha, okuyinto uhlelo efakwe kwi SSD-drive, kwenze cishe akunakwenzeka. Siyini isizathu ukuziphatha okunjalo OS?
Ibhulogi esemthethweni Microsoft uthi lokhu kungenxa esisheshayo kakhulu ukuqalisa isikhathi. Steve Sinofsky basho into efanayo, futhi isikhathi eside ngaphambi amaphutha kakhulu. Inkinga iba enkulu isivinini uhlelo ebhuthini, ikakhulukazi uma kuziwa hard drive. Kulokhu, uhlelo umane akudingeki isikhathi "ukubona" ngokucindezelwa wathi okhiye. Ngakho indlela uqala ikhompyutha yakho kwimodi ephephile? Windows 8, ngeshwa, kukhethwa umsebenzisi akabashiyi ... Uma usebenzisa nsukuzonke noma i-laptop, ne UEFI BIOS kanye SSD ke kumodi ephephile okhiye ungenalo ivuleke ohlelweni. Yiqiniso, uma ungenayo impendulo umbani-fast. Njengoba amakhompyutha ubudala ngenqubo evamile ye-hard drive, lokhu kutholakala kwezinye izimo.
Ngakho sakhuluma mayelana nendlela ukuya kumodi ephephile. Windows 8 - uhlelo ephelele, uma wazi yonke imininingwane ngokusetshenziswa kwalo. Khumbula ukuthi uma kwenzeka ukuphazamiseka sína kangaka ukuqalisa inketho awukwazi ukusiza. Kuyoba cishe udinga ukusebenzisa zonke izici esikhundleni flash drive noma disk, okuyinto thina kakade okukhulunywe ngaye ngenhla.
Ukuphumelela lokuxazulula inkinga!
Kwenzekani uma u-Ctrl + W, noma Qaphela okhiye!
Ukuphepha Fire ekukhiqizeni: nezidingo eziyisisekelo